Ama-Succulents ama-20 Womthunzi Wamagceke Anendlala Yelanga - Amacacti Namasucculents
Ama-Succulents ama-20 Womthunzi Wamagceke Anendlala Yelanga
AmaSucculents aziwa kakhulu ngokuthanda ilanga. Kepha kuthiwani uma ingadi yakho ikakhulu iyizithunzi noma kuthathwa wonke amafasitela akhanyayo? Ngenhlanhla, unezinketho. Kunezinambuzane eziningi zomthunzi ezibekezelela noma ezichumayo engadini, ezinye zazo eziveza izimbali!
Manje, uma sithi umthunzi, sisho izithunzi ezinelanga elincanyana. Kufanele kube nokukhanya okuthile. Ngeshwa, awukwazi ukunamathisela lezi zimuncu ekhabetheni bese ulindela ukuthi zizophila. Kodwa-ke, ngebhalansi efanele, uzomangala ukuthi benza kahle kangakanani.
Ukuthi i-succulent yakho ikhula emthunzini akusho ukuthi ezinye izidingo zayo sezishintshile. Izinhlobo eziningi zisadinga amanzi amancane nenhlabathi ekhipha kahle. Ngoba kunokuhwamuka okuncane emthunzini, isitshalo sakho singahamba isikhathi eside phakathi kokunisela kunokujwayelekile.
Manje njengoba usukulungele ukugcwalisa lezo zikhala ezimnyama ngokuluhlaza, nazi izeluleko ezingama-20 nemibono yabashukela abathanda umthunzi.
Igama Lesayensi: UCrassula ovata
UJade Plant ingenye yezinambuzane eziningi ezibekezelela isomiso ezikhetha umthunzi. Amaqabunga awo abonakala enempilo emthunzini futhi aguqula umbala oluhlaza okotshani othandekayo. Isitshalo sakho seJade kusamele sithole ukukhanya okucwengekileyo, kepha hhayi ilanga eliqondile.
Uma iJade Plant yakho iqala ukuzithoba ngenxa yokuntuleka kokukhanya, yiphinde uyithena. Lokhu kuzokhuthaza isitshalo ukuthi sikhule esikhundleni sokukhula.
I-Fox Tail Agave
I-agga attenuata. Umthombo:
Igama Lesayensi: Ukunciphisa kuncishisiwe
I-Fox Tail Agave ingenye yeziphuzo ezinhle kakhulu zezindawo ezinomthunzi. Lezi zitshalo zibekezelela ngokweqile ngaphezulu noma ngaphansi kwamanzi (isici esingajwayelekile kumnandi!). Amaqabunga aqinile awesabi ukuthatha isikhala futhi ama-inflorescence angafinyelela kumamitha ayi-10 ubude. Ngenxa yalokhu, iFox Tail Agave izogcwalisa kalula izindawo ezinkulu ezinomthunzi egcekeni lakho.
Igama Lesayensi: I-Portulacaria afra
Akuzona nje kuphela lezi zitshalo ukudla okulula kwezindlovu, zikhula kahle emthunzini! Le nsizi ingakhula ibe yinde noma igcinwe incane engadini yangaphakathi. Amaqabunga awo amaningi ayinika ukubukeka okumnandi okuzophilisa ingadi yakho.
Ngokudla kweNdlovu, uzodinga indawo enomthunzi ogqamile. Noma kuyisithunzi, indawo kufanele ifudumele ukuze lesi sitshalo sikhule.
Igama Lesayensi: ISedum
Omdabu oseningizimu yeMexico naseHonduras, iBurro's Tail iyi-sedum esebenza kahle nelanga elihlungiwe. Isidingo saso sokukhanya esivamile amahora amane kuphela elanga ngosuku, ngakho-ke ukuba semthunzini akususi kakhulu. Okufanelekile, kufanele ithole ukukhanya okukhulu ekuseni. Ukuphumula kosuku kungafakwa umthunzi.
Into ekhohlisayo ngoMsila weBurro amaqabunga neziqu. Laba bantu abathandekayo bawa kalula, okwenza kube nzima ukuhambisa isitshalo. Sincoma ukuthi ukhethe indawo eyodwa ye-Burro's Tail yakho bese uyishiya lapho, iyenze ibe yindawo ehlala njalo yendawo yakho.
Umgogodla kaDeveli. Umthombo:
Igama Lesayensi: I-Euphorbia tithymaloides
Ungavumeli igama elingaziwa likukhohlise, lokhu okumnandi kuyajabulisa. Ngokushintshana kwamaqabunga kanye ne-bracts enemibala, iDeveli Backbone ingenye yeziphuzo ezimnandi ezinomthunzi. Imvamisa ithanda ukukhanya kwelanga okungaqondile kepha kulungile ngezindawo ezinomthunzi futhi.
Qaphela ngalesi sitshalo! IDeveli's Backbone iqukethe ubisi olumhlophe olungaba nobuthi.
Igama Lesayensi: USenecio rowleyanus
Zingazwakala zikanokusho futhi zintofontofo, kepha i-String of Pearls ingama-succulent aqinile uma kukhulunywa ngokukhanya. Zikhula kahle emthunzini oyingxenye ngemiphumela embalwa, uma ikhona, emibi. Uma ubona noma yikuphi ukukhula kwemilenze kulesi sitshalo, kungenzeka kakhulu ukuthi kusuka kumanyolo omningi hhayi i-etiolation.
Lezi zitshalo ziyahlukahluka. Bangakhula ngaphakathi, ngaphandle, ngamalungiselelo, noma bodwa. Kodwa-ke, qaphela ukuthi 'amaparele' amancane anobuthi ezinganeni nasezifuyweni. Isincomo sethu? Yilengise ekhoneni lekamelo lakho lokulala ukuze ubukeke ulula futhi uhlanzekile.
Imbali ye-Hoya carnosa. Umthombo:
Igama Lesayensi: I-Hoya iyinyama
uyisebenzisa nini i-retinol serum
Omdabu asempumalanga ye-Asia ne-Australia, le nselo ekhuphukayo yaziwa kakhulu ngamaqoqo awo wezimbali ezimnandi. Ongase ungaqageli nokho ukuthi yisitshalo esibekelwe emuva kakhulu. A isitshalo se-wax uzokhetha ilanga elihlungiwe kunelanga eligcwele, okwenza kube ukwengeza okuhle engadini yakho. Lokhu kubhangqwe nesidingo salo samanzi amancane kanye nokushisa kwendlu okulingene kukwenza kube esinye seziphuzo ezilula kakhulu zensimu ezikhulayo.
I-cactus kaKhisimusi. Umthombo:
Igama Lesayensi: I-Schlumbergera
I-cactus kaKhisimusi akukhona yini lokho ukuthanda ukukhanya ukuqala ngakho-ke kwenza umthunzi omkhulu isitshalo esinamanzi. Ngokungafani nezinye, lesi sitshalo sizoqhakaza ekukhanyeni okuphansi. Lokhu kuyinzuzo enkulu, uma unikezwa ukuthi yizimbali ezikhanyayo zinhle kakhulu.
Lesi sitshalo kulula ukusinakekela futhi ukusabalalisa . Kungaba yilokho okudingayo kulelo kona elimnyama.
I-Easter cactus. Umthombo:
Igama Lesayensi: Hatiora gaertneri
Ngokufana neKhisimusi Cactus, lokhu kuyisiphundu esihle esinezidingo zokukhanya ezingajwayelekile. I-Easter cactus i-epiphyte, ngakho-ke ikhula ngokwemvelo ebusweni beziqu zemithi. Ngenxa yalokhu, isetshenziselwa umthunzi nokukhanya okuhlungiwe. Ngenkathi singakutusi ukuthi uyinamathisele esihlahleni, izochuma emthunzini oyingxenye. Izimbali nazo zihle impela.
Umugqa wobhanana empeleni udinga umthunzi oyingxenye, hhayi nje ukubekezelela. Iyachuma nelanga elinqunyiwe nokunisela okuncane lapho itshalwe ngaphandle. Kodwa-ke, uma ufakwa ngaphakathi, lo mnandi udinga ukukhanya okuthe xaxa kunokujwayelekile.
Akunandaba ukuthi uwuthanda kangakanani ubhanana, ngicela ungasingenisi lesi sitshalo.
IWoodland Stonecrop. Umthombo:
Igama Lesayensi: I-tematum eluhlaza
Owomdabu empumalanga ye-United States, lo mnandi ubizwa nge-Stonecrop ngenxa yezidingo zawo ezifana nedwala: akukho lutho. Woodlan d I-Stonecrop imvamisa izokhula kunoma yini kusuka ekukhanyeni okukhanyayo kuye emthunzini ogcwele. Ichuma ngokunisela okuncane futhi empeleni iyazitshala.
Kalanchoe blossfeldiana. Umthombo:
Igama Lesayensi: Kalanchoe blossfeldiana
Uma ufuna amanye amahlamvu amahlathi, iFlaming Katy ingaba isitshalo sakho. Le nsizi ethandwayo ivame ukutshalwa endlini ngoba idinga amazinga okushisa afudumele. UFlaming Katy uzobekezelela umthunzi kahle, kodwa izimbali zawo ngeke. Uma lokhu kuzoba umthunzi wakho omnandi, qiniseka ukuthi ukhetha ngenxa yezizathu ezingezona eziqhakaza kuphela.
Kalanchoe tomentosa. Umthombo:
Igama Lesayensi: Kalanchoe tomentosa
Yinhle futhi iyabhida, Isitshalo sePanda iyisiphuzo esidumile. Yize umthunzi ogcwele ungewona umngani wawo, ukhula kahle ngokukhanya okuyingxenye nje. Ngokufanelekile, indawo yePanda Plant kufanele ibe ngamamitha ambalwa ukusuka efasiteleni elibheke eningizimu.
U-Aristaloe aristata. Umthombo:
Igama Lesayensi: U-Aristaloe aristata
Lo mthunzi omnandi omncane futhi uqinile. Ikhula kahle ezindaweni ezinomthunzi ngaphakathi nangaphandle. Ngisho nasethunzini, i-Lace Aloe yaziwa ngokusinda ebusika kwezinye izindawo. Izinga lokushisa eliphansi ngu-0 ° F - ngendlela ephansi kune-juicy yakho ejwayelekile.
Ukubukeka kahle, i-Lace Aloe inamachashazi amhlophe futhi inamaphuzu acijile, amahle. Kuyakhula futhi ngokushesha, okungajwayelekile kuma-succulent.
UCrassula ovata ‘Gollum’
Igama Lesayensi: UCrassula ovata ‘Gollum’
Ilungu lomndeni wakwaCrassulaceae, lo mnandi wathola igama lakhe ku-Lord of the Rings. Ibuye ibe nesihlobo esibizwa nge-‘Hobbit ’! Ama-fandoms eceleni nokho, i-Crassula ovata 'Gollum' isitshalo esihle kakhulu sezindawo ezinomthunzi omncane. Kodwa-ke, inezidingo ezijwayelekile ezimnandi uma kukhulunywa ngokunisela nenhlabathi.
Lapho igcinwa emthunzini, i-‘Gollum ’ingalahlekelwa izeluleko zayo ezibomvu. Ukukhishwa kwemithi nakho kungenzeka uma umthunzi umnyama kakhulu.
Igama Lesayensi: Sansevieria trifasciata
Yebo, lokhu kumnandi! Isitshalo Sezinyoka Amaqabunga agcina amanzi anemigqa ephuzi akhula kahle enhlabathini eyomile nokukhanya okungaqondile. Kuyaziwa ngokuhlala kahle emthunzini. Kodwa-ke, umbala weSansevieria ungaphela futhi ukukhula kwawo kungamiswa ukungabi khona kokukhanya, ngakho-ke uma ufuna ukukubeka efasiteleni elibheke eningizimu, lizochuma.
Isitshalo se-Shake siyindlela enhle yabaqalayo. Kunakekelwa okuphansi ngokwedlulele, kukhipha ubuthi emoyeni, futhi kunokubukeka okuhlukile. Ngikhule isabelo sami esifanele kulezi zitshalo futhi angikwazi ukuzincoma ngokwanele.
Igama Lesayensi: I-Aeonium haworthii ‘Kiwi’
Ukukhanya kwelanga okuyingxenye kulungile nje kulokhu okumnandi okumnandi. Aeonium Kiwi ikhula kahle emafasiteleni abheke entshonalanga, ama-terrariums, nezitsha zangaphandle. Kodwa-ke, lokhu okumnandi kuyi-monocarpic, okusho ukuthi iyafa ngemuva kokuqhakaza.
Njengama-succulent amaningi, i-Aeonium Kiwi ikhula kancane. Umthunzi unganciphisa ukukhula kwawo ngokwengeziwe. I-Aeonium Kiwi nayo kungenzeka ilahlekelwe umbala wayo wothingo ngaphandle kwelanga elikhanyayo.
I-Ceropegia woodii. Umthombo:
Igama Lesayensi: I-Ceropegia woodii
odabuka eNingizimu Afrika, umusa wakhe unenhliziyo ethethelelayo. Kubekezelela kakhulu umthunzi namanzi aphansi, yize uzothola imiphumela emihle kakhulu ngezithunzi ezikhanyayo. Noma kusethunzini elipholile, Umugqa wenhliziyo kudinga ukushisa okufudumele ngaphezu kuka-60 ° F.
Okubi ngokukhulisa lesi sitshalo emthunzini umbala waso. Ngaphandle kokukhanya okuningi, amaqabunga avame ukuba mnyama futhi ashubile azoshabalala abe luhlaza okotshani, okhanyayo. Bona ukuthi ungazithola yini izandla zakho kumlimi onhlobonhlobo - ukubukeka kwangempela!
Igama Lesayensi: IBeaucarnea recurvata
I-Ponytail Palm ungumkhohlisi impela. Akuzona nje kuphela izintende zokulingisa, zijabulela nomthunzi yize zivela ogwadule. Uma nje benikezwa ukushisa, iPonytail Palm ikhula kahle emthunzini oyingxenye, noma ngabe ihamba kancane.
Ayidingi ukunakekelwa okuningi, kepha iPonytail Palm ukuzibophezela lapho ikhulele endlini. Iziqu ezinde zingafinyelela kumamitha ayi-15 ngaphandle kokuthena - zide impela. Lokhu okumnandi kungathatha indawo yefenisha egumbini lakho lokuphumula.
I-Haworthia attenuata var. i-radula. Umthombo:
Igama Lesayensi: Haworthia attenuata
Imiklamo ehlaba umxhwele yalolu hlobo iyashesha ukunakwa. Ngisho nasendaweni emnyama, lokhu okumnandi kuzovela. Hhayi kuphela Isitshalo seZebra phatha umthunzi kahle, ungabekezelela amazinga ahlukahlukene wokukhanya. Lokhu kukwenza kube kuhle kumabala athola ukushintshana kwelanga nomthunzi.
I-Zebra Plant ingumlimi ohamba kancane, ikakhulukazi emathunzini. Uma ukhula endlini, ungabeka iZebra Plant yakho elangeni ngaphandle ngezikhathi ezithile. Lokhu kuzoyikhuthaza ukuthi ikhule kakhulu, kodwa ayidingeki.
Kunezitshalo eziningi ezinomsoco ezisebenza kahle emthunzini: i-haworthia, i-agave, i-aloe, kanye ne-cacti ethile, ngakho-ke hlala ubukele iziphuzo ezinothando zasendlini, zomthunzi, nezamakhaza esikhathini esizayo!
intambo yamashiya eshibhile iseduze kwami
ulunge kanjani ushokoledi omnyama kuwe
abesifazane ihembe elincane elilinganayo
eziqongweni zamathangi ezihamba phambili zabesifazane